ကံဆိုးမှု​တှေ​ရောကျ​လာ​တော့မညျ​ဆိုရငျ - Tameelay
ကမ်ဘာ​မွေ​ပျေါမှာဖွဈ​​ပျေါလာမယျ့​ကပျ​​ဘေးဆိုး​တှအေကုနျ​လုံးဖွဈ​​ပျေါလာ​တော့မယျ​ဆိုရငျ​ သူ့အ​နနေဲ့လူသား​တှကေိုကွိုတငျ​ပွီးအမွဲသတိ​ပေးပါတယျ​။ လူသား​တှသောအမှုမှတျ​မဲ့နားမလညျ​နိုငျ​ခဲ့ကွတာပါ။
မာယာမြားပါတယျ​ဆိုတဲ့ ပငျ​လယျ​ပွငျ​ကွီးမှာလညျး မုနျ​တိုငျး​တှတေိုကျ​ခတျ​​တော့မယျ​ဆိုရငျ ​ရုတျ​တရကျ​​လေ​တှငွေိမျ​သကျ​သှားတာမြိုး . . . .
​မွငေလငျြ​​တှလှေုပျ​ခတျ​​တော့မယျ​ဆိုရငျ ​​မွေ​အောကျ​​မှာ​နထေိုငျ​တဲ့သတ်တဝါ​လေး​တှေ​ မွေ​ပျေါတကျ​လာတာမြိုး စသဖွငျ့​သဘာဝတရားကွီးဟာ လူသား​တှကေိုလက်ခဏာတှပွေ​ပေးတယျ​။
ထို့အတူလူသား​တှရေဲ့ဘဝအသကျ​တာတဈ​​လြှောကျ​မှာလညျး ကံဆိုး​မှု​တှဖွေဈ​​ပျေါလာ​တော့မယျ​ဆိုရငျ​လညျး သူဟာ​​ပွောပွတယျ​ သတိ​ပေးတယျ​။ ကြှနျ​​တျော​တို့​တှသေတိမပွုမိခဲ့ကွလို့သာ ဆိုကျ​ဆိုကျ​မွိုကျ​မွိုကျ ​ဒုက်ခဆိုတဲ့​ကောငျ​က​ ရောကျ​ခလြာ​ပေ​တော့တာပဲ။
ဒါ​တှကေို ကွိုတငျ​တာဆီးထားဖို့ ဖွဈ​နိုငျ​မလားဆိုရငျ​​တော့ ဖွဈ​စရာရှိတဲ့ကိစ်စတဈ​ခုက​တော့ဖွဈလာမှာပါပဲ
ကွီးမားတဲ့ခှဲစိပျ​မှု​တှမှော နာကငျြ​မှုသကျ​သာ​အောငျ​ ထုံ​ဆေး​မေ့​ဆေးအသုံးပွုသလို​
​နညျးစနဈ​ကတြဲ့ ယတွာအစီအရငျ​​တှဟော ဘဝဒဏျ​ရာ​တှသေကျ​သာ​စဖေို့အတှကျ ​ပရုတျ​ဆီ​လေးပါးပါးလူးလိုကျ​သလို​ပေါ့။
​နစေ့ဉျ​ကငျြ​လညျ​​နရေတဲ့ ပတျ​ဝနျးကငျြ​မှာ အ​နှောငျ့​အယှကျ​​တှမြေားလာခဲ့မယျ​ ကိုယျ့​လုပျ​ငနျးခှငျ​မှာတဖွညျးဖွညျးနဲ့လညျးအလှဲလှဲအ​ခြျော​​ခြျော​​တှကွေုံလာခဲ့ပွီး
ခငျ​မငျ​ရငျးနှီးရတဲ့ မိတျ​​ဆှေ​တှကေိုယျ​တိုငျ​က မိမိအ​ပျေါအမွငျ​တိမျး​စောငျးခွငျး​တှနေဲ့အတူ မ​ကောငျးတဲ့အတိတျ​မ​ကောငျးတဲ့နိမိတျ​​တှကေိုမွငျ​ရ​တှရေ့ကွုံလာခဲ့ရရငျ​ဒါဟာမိမိအတှကျ​ ကွိုတငျ​ကံဆိုးမှု​တှရေဲ့နိမိတျ​သ​ဘော​တှပေဲဖွဈ​ပါတယျ​။
ဒါ့အပွငျ ​မိမိအမွဲ​နထေိုငျ​​အနားယူတဲ့ မိမိအိမျ​​နရောအိပျ​ခနျးစတဲ့​နရောမြိုး​တှမှော အရငျ​လိုသကျ​​သောငျ့​သကျ​သာမဖွဈ​လာခွငျးမြိုး​တှကေို ကွုံ​တှလေ့ာရသလို တဇှတျ​ထိုးဆနျ​တဲ့စိတျ​​တှလေညျးမြားလာခဲ့မယျ​ဆိုရငျ​​ သခြောပါပွီ ခမြားဆီကို မကွာခငျ​အမှနျ​တကယျ​ပဲ ကံဆိုး​မှု​တှေ​ ရောကျ​ရှိလာ​တော့မှာပါ။
ဒါ​တှဟောအနကျ​​ရောငျ​ရဲ့ စှမျးအား​တှပေါပဲ။ဒီအနကျ​​ရောငျ​စှမျးအား​တှကေို​ ဖြောကျ​ဖကျြ​ပွဈ​လို့​တော့ မရ​ပမေယျ့​စှမျးအငျ​​လြော့နညျး​စေ​အောငျ​ ဒါမှမဟုတျ​စှမျးအား​ပွောငျးလဲသှား​အောငျ ​ပွုလုပျ​လိုကျ​လို့​တော့ရပါတယျ​။
ဒီလိုအရာမြိုး​တှကေို ဘယျ​လိုအစှမျး​လြော့နညျး​အောငျ​လုပျ​နိုငျ​မလဲဆိုတာနဲ့ ပတျ​သကျ​ပွီး ကြှနျ​​တျော့​အ​နနေဲ့ဆိုရငျ​​တော့ သဘာဝကပြွီး လုပျ​ရလှယျ​ကူသလို ထိ​ရောကျ​အဆငျ​​ပွနေိုငျ​တဲ့နညျးလမျး​လေး​တှသောရှိပါတယျ​။
ယခုလိုကိစ်စမြိုး​တှကွေုံလာခဲ့မယျ​ဆိုရငျ​​တော့ မိမိအဝတျ​အစား​ဟောငျး​တှထေဲမှ အနကျ​​ရောငျ​ရှိတဲ့ အဝတျ​အစား​ဟောငျးတဈ​ထညျ​ကို အဝတျ​စုတျ​တဈ​ခုအဖွဈ​အသုံးခပြွီး မိမိအခနျး ၊ အလုပျ​​နရော ၊ ​နအေိမျ​တံခါး ၊ ​နအေိမျ​မှကွညျ့​မှနျ​​တှကေိုထိုအဝတျ​အစားဖွငျ့​ သနျ့​ရှငျး​ရေး​လေးသာလုပျ​​ပေးပါ။
အဝတျ​အနကျ​မရှိဖူးမ​ပွောပါနဲ့ မရှိရငျ​​စြေး​ပေါ​ပေါတဈ​ထညျ​ကို ဝယျ​ယူဝတျ​ဆငျ​အသုံးပွုလိုကျ​ ဖို့ရာပဲ​ပွောခငျြ​ပါတယျ​။ ယခုခမြားအ​နနေဲ့ ကွပျ​တညျး​နတေဲ့အခကျ​အခဲ အ​နှောငျ့​အယှကျ​​တှရှေိ​နခေဲ့ရငျ​ ဒီစာကိုဖတျ​ပွီးပွီးခငျြးသာလုပျ​​ဆောငျ​ပါ။
မွနျ​ရငျ​သုံးရကျ ​ကွာရငျ​ဆယျ​ရကျ​အတှငျး အခကျ​အခဲကွီးမား​သေးမှားမှုအ​ပျေါမူတညျ​ပွီး အခြိနျ​အတိုငျးအတာတဈ​ခုအတှငျး အဆငျ​​ပွပေါလိမျ့​မယျ​။ အပငျြးမကွီးပါနဲ့ တဈ​​ခေါကျ​တညျး​တော့ မလုပျ​ပါနဲ့ မကွာမကွာလုပျ​လိုကျ​ဖို့အကွံပွုပါရ​စေ။
သတ်တဝါတို့၏အကြိုးကိုသာလိုလား​သော . . .
ကမ္ဘာ​မြေ​ပေါ်မှာဖြစ်​​ပေါ်လာမယ့်​ကပ်​​ဘေးဆိုး​တွေအကုန်​လုံးဖြစ်​​ပေါ်လာ​တော့မယ်​ဆိုရင်​ သူ့အ​နေနဲ့လူသား​တွေကိုကြိုတင်​ပြီးအမြဲသတိ​ပေးပါတယ်​။ လူသား​တွေသာအမှုမှတ်​မဲ့နားမလည်​နိုင်​ခဲ့ကြတာပါ။
မာယာများပါတယ်​ဆိုတဲ့ ပင်​လယ်​ပြင်​ကြီးမှာလည်း မုန်​တိုင်း​တွေတိုက်​ခတ်​​တော့မယ်​ဆိုရင် ​ရုတ်​တရက်​​လေ​တွေငြိမ်​သက်​သွားတာမျိုး . . . .
​မြေငလျင်​​တွေလှုပ်​ခတ်​​တော့မယ်​ဆိုရင် ​​မြေ​အောက်​​မှာ​နေထိုင်​တဲ့သတ္တဝါ​လေး​တွေ​ မြေ​ပေါ်တက်​လာတာမျိုး စသဖြင့်​သဘာဝတရားကြီးဟာ လူသား​တွေကိုလက္ခဏာတွေပြ​ပေးတယ်​။
ထို့အတူလူသား​တွေရဲ့ဘ၀အသက်​တာတစ်​​လျှောက်​မှာလည်း ကံဆိုး​မှု​တွေဖြစ်​​ပေါ်လာ​တော့မယ်​ဆိုရင်​လည်း သူဟာ​​ပြောပြတယ်​ သတိ​ပေးတယ်​။ ကျွန်​​တော်​တို့​တွေသတိမပြုမိခဲ့ကြလုိ့သာ ဆိုက်​ဆိုက်​မြိုက်​မြိုက် ​ဒုက္ခဆိုတဲ့​ကောင်​က​ ရောက်​ချလာ​ပေ​တော့တာပဲ။
ဒါ​တွေကို ကြိုတင်​တာဆီးထားဖို့ ဖြစ်​နိုင်​မလားဆိုရင်​​တော့ ဖြစ်​စရာရှိတဲ့ကိစ္စတစ်​ခုက​တော့ဖြစ်လာမှာပါပဲ
ကြီးမားတဲ့ခွဲစိပ်​မှု​တွေမှာ နာကျင်​မှုသက်​သာ​အောင်​ ထုံ​ဆေး​မေ့​ဆေးအသုံးပြုသလို​
​နည်းစနစ်​ကျတဲ့ ယတြာအစီအရင်​​တွေဟာ ဘဝဒဏ်​ရာ​တွေသက်​သာ​စေဖို့အတွက် ​ပရုတ်​ဆီ​လေးပါးပါးလူးလိုက်​သလို​ပေါ့။
​နေ့စဉ်​ကျင်​လည်​​နေရတဲ့ ပတ်​၀န်းကျင်​မှာ အ​နှောင့်​အယှက်​​တွေများလာခဲ့မယ်​ ကိုယ့်​လုပ်​ငန်းခွင်​မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းအလွဲလွဲအ​ချော်​​ချော်​​တွေကြုံလာခဲ့ပြီး
ခင်​မင်​ရင်းနှီးရတဲ့ မိတ်​​ဆွေ​တွေကိုယ်​တိုင်​က မိမိအ​ပေါ်အမြင်​တိမ်း​စောင်းခြင်း​တွေနဲ့အတူ မ​ကောင်းတဲ့အတိတ်​မ​ကောင်းတဲ့နိမိတ်​​တွေကိုမြင်​ရ​တွေ့ရကြုံလာခဲ့ရရင်​ဒါဟာမိမိအတွက်​ ကြိုတင်​ကံဆိုးမှု​တွေရဲ့နိမိတ်​သ​ဘော​တွေပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒါ့အပြင် ​မိမိအမြဲ​နေထိုင်​​အနားယူတဲ့ မိမိအိမ်​​နေရာအိပ်​ခန်းစတဲ့​နေရာမျိုး​တွေမှာ အရင်​လိုသက်​​သောင့်​သက်​သာမဖြစ်​လာခြင်းမျိုး​တွေကို ကြုံ​တွေ့လာရသလို တဇွတ်​ထိုးဆန်​တဲ့စိတ်​​တွေလည်းများလာခဲ့မယ်​ဆိုရင်​​ သေချာပါပြီ ခများဆီကို မကြာခင်​အမှန်​တကယ်​ပဲ ကံဆိုး​မှု​တွေ​ ရောက်​ရှိလာ​တော့မှာပါ။
ဒါ​တွေဟာအနက်​​ရောင်​ရဲ့ စွမ်းအား​တွေပါပဲ။ဒီအနက်​​ရောင်​စွမ်းအား​တွေကို​ ဖျောက်​ဖျက်​ပြစ်​လို့​တော့ မရ​ပေမယ့်​စွမ်းအင်​​လျော့နည်း​စေ​အောင်​ ဒါမှမဟုတ်​စွမ်းအား​ပြောင်းလဲသွား​အောင် ​ပြုလုပ်​လိုက်​လုိ့​တော့ရပါတယ်​။
ဒီလိုအရာမျိုး​တွေကို ဘယ်​လိုအစွမ်း​လျော့နည်း​အောင်​လုပ်​နိုင်​မလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး ကျွန်​​တော့်​အ​နေနဲ့ဆိုရင်​​တော့ သဘာဝကျပြီး လုပ်​ရလွယ်​ကူသလို ထိ​ရောက်​အဆင်​​ပြေနိုင်​တဲ့နည်းလမ်း​လေး​တွေသာရှိပါတယ်​။
ယခုလိုကိစ္စမျိုး​တွေကြုံလာခဲ့မယ်​ဆိုရင်​​တော့ မိမိအ၀တ်​အစား​ဟောင်း​တွေထဲမှ အနက်​​ရောင်​ရှိတဲ့ အ၀တ်​အစား​ဟောင်းတစ်​ထည်​ကို အ၀တ်​စုတ်​တစ်​ခုအဖြစ်​အသုံးချပြီး မိမိအခန်း ၊ အလုပ်​​နေရာ ၊ ​နေအိမ်​တံခါး ၊ ​နေအိမ်​မှကြည့်​မှန်​​တွေကိုထိုအ၀တ်​အစားဖြင့်​ သန့်​ရှင်း​ရေး​လေးသာလုပ်​​ပေးပါ။
အ၀တ်​အနက်​မရှိဖူးမ​ပြောပါနဲ့ မရှိရင်​​ဈေး​ပေါ​ပေါတစ်​ထည်​ကို ၀ယ်​ယူဝတ်​ဆင်​အသုံးပြုလိုက်​ ဖို့ရာပဲ​ပြောချင်​ပါတယ်​။ ယခုခများအ​နေနဲ့ ကြပ်​တည်း​နေတဲ့အခက်​အခဲ အ​နှောင့်​အယှက်​​တွေရှိ​နေခဲ့ရင်​ ဒီစာကိုဖတ်​ပြီးပြီးချင်းသာလုပ်​​ဆောင်​ပါ။
မြန်​ရင်​သုံးရက် ​ကြာရင်​ဆယ်​ရက်​အတွင်း အခက်​အခဲကြီးမား​သေးမွှားမှုအ​ပေါ်မူတည်​ပြီး အချိန်​အတိုင်းအတာတစ်​ခုအတွင်း အဆင်​​ပြေပါလိမ့်​မယ်​။ အပျင်းမကြီးပါနဲ့ တစ်​​ခေါက်​တည်း​တော့ မလုပ်​ပါနဲ့ မကြာမကြာလုပ်​လိုက်​ဖို့အကြံပြုပါရ​စေ။
သတ္တဝါတို့၏အကျိုးကိုသာလိုလား​သော . . .
(၁၈-၅-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ နံနကျ (၇:၃၀)နာရီ COVID-19 ရောဂါစောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ သတငျးထုတျပွနျခွငျး